Mavambo nenhoroondo yemaparera muAfrica - AFRIKHEPRI
Kutanga uye nhoroondo yemaparera muAfrica
Kutanga uye kujekesa mumweya - René Guénon (PDF)
sunday, mai 24, 2020
kugashira KUVA NOKUSHA
12 min kuverenga
Vers 2 BC VaIjipita vakatoita girazi mikoro. MuEgypt yekare, yakanyanya kutsvaga mairi maiva mukati matombo, nyokaine, agate, turquoise, lapis lazuli uye mamwe matombo ematombo anokosha akazoshandiswa semaparera. Gare gare, basa re silica ichabereka maparera zvishoma kudhura kupfuura matombo uye kutarisa maumbirwo uye mavara.
Kutamba maparera, yekutanga girazi vashandi vakashandisacopper oxide kuwana turquoise ruvara rwebhuruu, kana kunyangemanganese oxide kuwana ruvara rwepepuru kana shazha kutevedzera amethyst kana agate. Maitiro ekuwanda kwekugadzira aizodzokera kune mashoma 2 200 makore asati asvika.
Dzimwe nyanzvi dzinopfuurira mberi maitiro ekare kuita maparera emhando yakanakisisa: the Clay paste yakaiswa dyes-based dyes inotambanudzwa kumativi ose mashizha kuti aite tubes akachekwa kuita zvidimbu zviduku zvinowanika pamataipi. Kana imwe nguva yakaoma, bvisa tsvina ugobika mabhesi pamatareti esimbi. Iyi nzira yekugadzira inoshandisa nzvimbo dzekushandisa kuburikidza nekuvimba chete nehupenzi. Aya maparera anobvumira zvinyorwa pedyo nevaya vanomiririrwa pamafereko emakuva evaEgipita.
Nhoroondo yemaparera eMaasai
VaMaasai vaparidzi vanoita zvechihedheni vanosimbiswa pakati peKenya neTanzania. Nzvimbo yavo yakakwirira inovabvumira kupfeka mbatya nguva dzose dzakapfuma kwazvo: zvishongo, zvikohwe zvemhuka, kuisa misoro yepamusoro ...avo vanopupura kuti vane ushingi, maitiro avo kana kukunda kwavo. Kubvira muzana remakore rechi18, vakadzi veMaasai vave vachigadzira marara anokosha kubva barter beads.
Les pearl embroidery vanhu vanoita zvematongerwe enyika vanozviona ivo semitauro rakasimba shati, aluminium kana bone, rakapindirana pakati pemitsetse yemaparera mumitsipa, kana zvidimbu zvehumbodo zvinotsigira maitiro ejeriometric mhete dzakapfeka chete nevakadzi vakaroora. Muvara woga woga unoreva: bhuruu, muenzaniso unobvumira Mwari neDenga, ruvara runobvumira rugare nemiriwo. Mabasa epakutanga haana kushandisa mapearuru ejeri nearamisire, ayo asina kuonekwa kusvikira nguva yakareba gare gare.
VaMaasai vakachengeta tsika dzavo. Munguva yehupenyu hwavo, varume vanofamba mumatanho akasiyana, anocherechedzwa nemhemberero huru panguva iyo vanopfeka mavara akanaka Shati yakashongedzwa, sleeve, majoko, mabhokisi emagetsi, nezvimwewo. Pamitambo iyi, vakadzi vanopfekawo kuunganidza pearl zvishongo zvinoratidza nzvimbo yavo, makore uye mhuri.
Nhau yemaparera eKenya
Le Kenya kunyanya inokosha mukushandiswa kwemhando mbiri dzemaparera : yakare maparera nhunzi yemhou uye maparera emazuva ano mufupa ruvara rweganda.
Nzizi mazai mazai vave vachizivikanwa muKenya kwenguva yakareba: iyo shell inodururwa kuita zviduku zviduku, izvo zvinorohwa kuti zvipfeke nekuputirana pamwechete kuti zvive nehumwechete. Zvinoshandiswa zvose muzvishongo uye zvigadziriswa panguvo kana kuti yakarukwa. Vakanyora matepi nemapendero ematehwe, uye vaisanganiswa nemakwenzi pamapuroni ekubudisa, vaiva chiratidzo chekubereka. Denderedzwa yemaparera pamisoro yevasikana yakaratidza kubata kwavo, nguo dzavo dzakashongedzwa nehombodo.
Zvizhinji zve bone bone Vanouyawo vachibva kuKenya, kwavakagadzirwa kubva kumapfupa emombe: mapfupa akabikwa kuti abviswe nyore nyore kubva kune nyama yose, blanched, vozocheka kuva zvidimbu uye pakupedzisira zvidimbu zviyero zvemapfupa. namaparera. Iko rinopinza rinogadzirwa newaini yakakonzerwa nehuni inobvumira kusungirirwa kwakasimba. Yakanamirwa pamatanda akaoma, mabhesi acho akaomeswa kusvikira pasi rayo rakanyatsokwana kushandisa batik wax mumagetsi ejometri nemararamiro emadzitateguru. Miti yacho yakave yakasvibiswa mutsvuku, saka, kana dhayi raoma, iyo yakagadzirwa kuti ibudise pachena yakajeka uye isina bone bone. Maparera akafuridzirwa zvakare vasati vasungwa ...
Nhoroondo yemaparera ekutengeserana muAfrica
TheAfrique Est UN continent of contrasts : Zvitsva zvaro zvakasiyana-siyana kubva kumahombekombe eEatatorial kusvika kune magwenga emvura, makomo akakwirira kuenda kuSana. Mamwe marudzi, zvakare, akasiyana chaizvo, kubva pakutsvaga kumarudzi kusvika kumapoka akakwirira zvikuru.
Pasinei nezvipingamupinyi zvezvisikwa zverenje uye sango, migwagwa yekutengeserana uye yegungwa vave vachibatanidza nharaunda idzi izvo zvingave zvakasara zvakanyanya.
Iko kare mu 2300 pamberi paKristu; ariEgypte kutengesa kubva Gungwa Dzvuku Gungwa uye nenyika kusvikiraWest Africa and southern Sudan kuti awane goridhe.
Les vaFenikiya yakagadziriswa mabhuku pa Méditerranéekwavakaita uye kutengesa marozari. Les Berberskubva kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweAfrica yakavhura nzira dzebhizimisi dzichienda kuSahara kusvika kuSudan, Morocco, Tunisia neLibya. When Romans Vakapinda muAfrica, vakatora nzira dzekutengeserana ndokutumira makamera kuBerbers, iyo yakavabatsira kuti vawedzere basa ravo rekutengeserana. With the Arabhu kukunda yeMaghreb Muna 705 uye kuwedzera kweIslam, kutengeserana kwakapararira munharaunda yacho, kubva kuSpain kusvika kumaodzanyemba kwakadziva kweMali.
Munenge pakati pegumi nemashanu, ikozvino Mali akawedzera simba rayo muSana, muNiger River inoshandiswa senzira yekutakura. Indian maparera nemakwenzi, ndokuyambuka Sahara kubva kumhenderekedzo yekumabvazuva.
Kwemakore anenge 2 000, the Vatengesi veArabic neIndia yakagadzirirwa pamhenderekedzo yekumabvazuva yeAfrica. Munguva yevaRoma, nguva girazi mabheji kubva kuMediterranean Basin vakasvika kuChina neKorea. ari girazi mabheji South India yakava chinhu chinokosha kupfuura zvimwe zvekutengeserana muPacific Rim. MuMiddle Ages, Islam yakapararira dzidziso yayo uye kutengesa kuPakistan, kutengesa uye kutengesa maparera kubva kune zvakasiyana-siyana munzvimbo iyo. of girazi uye ceramic bhiza kubva kuPersia yaitengeswa kumabvazuva nekumadokero kweAfrica kubva muzana remakore rechipfumbamwe. Mhepo inobva kuIndia Ocean, ine mhepo yokutengesa nemhepo ine mhepo yakavhuvhuta kune imwe nzvimbo, yakabvumira ngarava kuti dzifambe uye dzichienda gore negore.
In the South AfricaPasinei nekufambisa kunotyisa, kushandiswa kwamaparera, kuchinjana kwegoridhe, kwakakura zvakasimba. Zvinhu izvi zvakapinda muAfrica kuburikidza nemakungwa uye ndokupinda mukati mukati mekutenda kune vanhu vakavadzorera zvakare. Kuyambuka kwemigwagwa iyi yose, pasi pose uye mumvura, kumativi ose eAfrica, inotsanangura kupararira kwemapare munyika yose.
Muzana remakore rechi16, zvekuEurope akatanga kufamba kumavirira kweAfrica. VaPutukezi ndivo vaive vokutanga. Vaida kufara mumisika yegoridhe yeArabhu uye vanowana nzira yegungwa kuenda kuIndia. Pasina nguva vakabatana nevaFrance, vaDutch, maGermany uye veChirungu, vakagadzira zvigadzirwa zvemabhizimisi pamhenderekedzo yegungwa, umo vakaunza zvinhu zvakagadzirwa, kusanganisira maparera.
Nhoroondo yemaparera echiZulu
Le Zulu kingdom, iyo inowedzera kumaodzanyemba-kumabvazuva kwegungwa riri kumaodzanyemba kweAfrica, yakatangwa mukutanga kwepfumbamwe nezana remakore neine Shaka king. Achienderera mberi nebasa revatungamiri vake, akabudirira mukubatanidza madzinza akapararira kuva rudzi rakasimba kurwisana neEuropey colonialism.
Les barter beads nguva dzose vaifamba vachienda kunharaunda yacho. Kwemazana emakore, VaRabhi vatengesi akapararira kumhenderekedzo yekumabvazuva kuenda kuDelagoa Bay, kuchinjana girazi mabheji kubva kuneIndia, Ijipiti neSiriya kunorwisa varanda, nenyanga dzenzou uye ndarama. Migwagwa yemigwagwa yakavhurwa nemunharaunda yekugovera zvinhu.
Mukufananidza, vaPutukezi, zvino vaDutch neBritain vakanga vachitarisa kumadokero nenzira yekufambisa yezvinonhuwira zvekutengeserana. Vakatengesa maparera nezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana zvekudya zvitsva kune vashandi.
Kubva kumabvazuva nekumadokero, maparera akawanda "akapinda" ose kumaodzanyemba kweAfrica. Mambo Shaka akavaropafadza zvikuru zvokuti akaraira a kodzero yekupera pane chero ipi zvayo mitsva yemaparera akatengeswa. Zvose maparera akaendeswa kuna iye asati azvigovera kuti ape mubayiro mauto ake kana kukudza vamwe vezvaanoda. Akashandisa zvakasimba pamusoro pebasa rose remaparera, pamwe nemutauro, maitiro sechisarudzo chemavara.
Maparera akanga asiri zvishongedze chete, asiwo maitiro ekukudza akacherechedza mararamiro evanhu uye akaratidza zvakakodzera zvevanhu vaipfeka.
Zulus dzakagadzira a mutauro wechokwadi wemaparera kuti utaure mashoko akasiyanarumwe ruvara rine zvarinoreva: chena zvinoreva kuchena kwe rudo, rima usiku, urombo hwepiniki, kubereka kwemavara, bhururu denga ... Dzimwe maparera zvakare akaratidza zera, zvepabonde, mamiriro ezvinhu emhuri, chimiro, nezvimwe, zveiye akavapfekedza. Yakagadzirirwa maererano nemutsetse mune zvinhu zvakajairika, zvakaparadzira mharidzo chaiye. Iyo yakakurumbira zvikuru yaiva zviratidzo zviduku zvakanamatira pamutsipa, zvakagadzirwa nevasikana vasikana vakavapa ivo vakasarudzwa pamwoyo yavo. Mukomana uyu aive achipa zvipfeko zvisingaoneki kuvasikana vasikana vasikana, icho chakanga chapedzwa kutumira shoko rakanyorwa neanogadziriswa, mavara uye mararamiro emaparera. Kusvikira pakati pezana remakore regumi nemapfumbamwe, maparera akazova nzira yekukurukurirana pakati pevanoda. Mishonga yakasiyana-siyana yekushongedza yakave yakarongerwa mumatare nevakadzi nevanasikana avo vakavaparadzira muumambo hwose pavakatamira kunogara kune vamwe mushure mekuroorana kwavo.
Imwe mushure mekupera kwemaMambo echiZulu uye pasi pekutungamirirwa kweEurope basa remaparera rakasiyana, rudzi rumwe nerumwe rukwanisa kupa rusununguko rwunosvika pakugadzirwa kwaro.
Mazuva ano, tsika yemaparesi ichiri kurarama zvikurukunyanya mukushandura yunifomu kana nekuda kwezviitiko apo chido chetsika chinodiwa. Kune rumwe rutivi, zvishongo zveparera ndezvakakosha zvekuwana mari kune vakadzi vakavaita uye vachivatengesa munguva dzezviitiko izvi ...
Nhau yemaparera a Ndebele
Nharaunda ye Ndéblés, pedyo neyo Zuluis kumhanya kumaodzanyemba kuSouth Africa neZimbabwe. Vakadzi vanozivikanwa pamakumbo avo nemakumbo emakumbo, iyo inoratidza chimiro chavo sevakadzi vakaroora.
Nyaya yeNdebele yakabatanidzwa nekudzivisa maBoers nekudzingwa pasi pehutongerwe enyika muSouth Africa. Izvi zvakasimbisa kushamwaridzana nemitambo nemhando dzose dzekuzvidzivirira, iyo vakadzi ndivo vanochengetedza zvikuru. Ndivo avo vanorongedza dzimba nemafuta ane mavara ejerometri frescoes, izvo zvatinowana maitiro mukati mezvinyorwa uye mitsipa yakarukwa kana yakarukwa yakaita kuti izivikanwe. Les zviduku zviduku zvakasungirirwa pahombodo yembudzi kana pamusana, mune geometrical pattern yakafanana nemifananidzo inoshongedza dzimba. Apo vakomana vachidzingwa kumakomo pashure pokudzingiswa, vasikana vanoziviswa kuveza uye maparera.
Les zvipfeko zvechechi inoratidzwa nepamusoro-soro huru yemaparera machena, ane zviduku zvemajetometri emaruva. Mabasa emaparera ane hutano hwevanhu, anofanana nemhando chaiyo yekushongedza uye nzira yekupfekedza iyo inoshanda yezvikamu zvakasiyana zvehupenyu hwevakadzi. Nokudaro, chipfeko chinoputika chinyorwa chinoratidza musikana, iyo yevechiri kuyaruka yakaitwa yeganda kana shongwe yakashongedzwa nemaitiro ejometri achifananidzira kuchinja kubva pakuyaruka kusvika pakukura, nepo mapuroni emadzimai akaroora akashongedzwa iri pakati pefringe uye lateral rectangles.
Kune dzimwe mhemberero, vakadzi vechidiki vechiNdebele vanopfekedza mitsipa yavo nemakumbo nemahombekiti makuru ehomwe kuitira kuti vamukurudzire mazano echato uye kusimbisa kunaka kwavo.
Nokuda kwemuchato, mwenga anove nemapiritsi mashanu emhando yemapurisa, chimiro chechimiro ichi, uye cape zvachose yakafukidzwa nemaparera, uyewo chifukidzo chemaparesi anonamatira pasi.
Chimwe chikamu chetsika dzedsika ndey apronji yekare yakapfeka nevakadzi vakakura. Yakagadzirwa nechiganda chematehwe chakasimudzwa kubva kune dutu rakaoma reparar-rakagadzirirwa uswa, pasi payo pane hombe yeparari. Pamichato, VaNdebele vanoitawo zvidhori zvekuberekwa kuti zviratidze kupfuurira kwemaitiro avo emitambo. Izvi zvidhori zvakagadzirwa nekono rakagadzirwa nemhete dzakasimudzirwa dzinobvaridza zvigadzirwa zvetsika.
VaNdebele vakanyatsogadzirisa matanho ehupenzi hwavo kune hupenyu hwemazuva ano kuburikidza nekushandiswa kwemaitiro uye geometric, mararamiro ezuva nezuva. Ihwohwo hupfumi hwakanyanya hweNdebele, kusanganisira iyo yemaparera, nguva dzose inotora vanhu vanofarira uye musamuziyamu. Iyo mavara maitiro avo anogona kuwanikwa mumativi akasiyana-siyana: high couture, kushambadzira, nezvimwe. Zvinhu zvizhinji kubva kuSouth Africa zvinobvumira munhu wese pasi rose, asina kunyange kuziva, kuziva uye kuonga zvimwe zvikamu zvetsika dzeNdebele. Imwe tsika yakawanda, yakachengetedzwa uye inogara ichishandurwa nevakadzi, inovimbisa kusimba kweyizi-sei.
The baya kana unyanzvi hweAfrica seduction
Tinogona here kuva "nokuda" kuchenesa kweganda?
Tora kutonga kwehupenyu hwako (Playlist)
Hondo Yenyika Z [Yekunze]